Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Philippe Kridelka as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Belgium to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Philippe Kridelka as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Belgium to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Philippe Kridelka as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Belgium to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok.
Mr. Philippe Kridelka was born on 18th May 1960 in Charleroi, Belgium. He was graduated with Master’s Degree in Law and joined the Belgian Diplomatic Service in October 1987. He had served at the Belgian Embassy in Tehran, Iran and at the Ministry of Foreign Affairs in Belgium, and at the Belgian Embassy in Warsaw as first secretary, deputy director and counsellor respectively from 1989 to 1995. He also served asadiplomatic advisor to the Belgian Minister for Foreign Trade in 1998, counsellor to the Belgian Representation to the European Union-World Trade (WTO) desk from 1999 to 2000, diplomatic advisor to the Belgian Deputy Prime Minister, in charge of Employment Policy and Gender Equality from 2000 to 2002, prior to his appointment as Ambassador of Belgium to the Republic of Singapore and to the Sultanate of Brunei Darussalam.
He served as Ambassador, Permanent Delegate of Belgium to UNESCO from 2005-2009, Director of Cabinet, Office of the Director General of UNESCO from 2009-2010, and Director of UNESCO’s Liaison Office in New York in 2010. Since September 2013, he has been serving as Secretary General of the Household of His Majesty the King of the Belgians.
He speaks French, English, Dutch and German. He is married and hasason.
Mr. Philippe Kridelka အား ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
Mr. Philippe Kridelka ကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ Charleroi မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဥပဒေဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ စတင်တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အတွင်း ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တီဟီရန်မြို့နှင့် ဝါဆောမြို့ရှိ ဘယ်လ်ဂျီယံသံရုံးတို့တွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၏ သံတမန်အကြံပေး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အထိ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ (WTO) ဆိုင်ရာ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွင် သံမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၏ အလုပ်သမားရေးရာမူဝါဒ နှင့် ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးဆိုင်ရာ သံတမန်အကြံပေး အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။
Mr. Philippe Kridelka သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဘယ်လ်ဂျီယံသံအမတ်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ UNESCO ဆိုင်ရာ ဘယ်လ်ဂျီယံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ UNESCO ဆိုင်ရာ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ UNESCO ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ လက်ရှိအချိန်အထိ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘုရင်၏အိမ်တော်ရေးရာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
Mr. Philippe Kridelka သည် ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဒတ်ချ်၊ ဂျာမန်ဘာသာစကားတို့ကို ပြောဆိုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ကာ သားတစ်ယောက်ရှိသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်